Brousia Dortmound Oo Sheegtay Midka Ay Iibin Doonto Sancho Ama Halland.
Home Horyaalka Germalka Brousia dortmound oo sheegtay Midka ay iibin doonto Sancho ama Halland.
Naadiga wadanka Jarmalka ka dhisan ee Brousia Dortmund waxay dooneysaa inay iska iibiso Sancho oo ay sii haysato weeraryahan keeda Erlling Haaland sida uu qorayo wargeyska kasoo baxa wadankaas ee lagu magacaabo Bild.
Labada ciyaartoyba waxaa lala xiriirinayaa kooxaha manchester united iyo Real madrid sidoo kale barcelona ayaa muujisay xiisaha ay u qabto Halland kooxda brousia ayaana ka heli karto lacag badan maadama ay yihiin xidigo saameyn ku yeeshay suuqa ciyaartoyda.
Borussia Dortmund ayaa doorbidi laheyd inay iibiso Jadon Sancho isla markaana ay sii hayaan Erling Haaland xagaagan, ayuu yiri Bild.
Kooxaha reer yurub ayaa si dhow ula socota horumarka labada xiddig laakiin Dortmund ayaa ka go’an inay sii hayaan weeraryahanka ugu fiican waqtigaan ee u dhashay wadanka Norwey.
Previous articleMan united oo wili ka harin xidiga barcelona iyo spian Anzu Fati.
Next articleCarlo Ancelotti oo meesha ka saaray wararka xanta ah ee sheegaya inuu James baxayo.